Somaliland.Org » Madaxweyne Riyaale oo Khudbaddiisii u dambeysey muddadiisa Madaxweynenimada u jeediyey labada Gole
April 29th, 2008 Comments Off Hargeysa (Somaliland.org) – Madaxweynaha Somaliland, mudane Daahir Riyaale Kaahin ayaa khudbaddiisii u dambeysey muddadii 5ta sannadood ahayd ee xilka loo doortay maanta u jeediyey labada gole ee Baarlamaanka Somaliland, waxana uu ka warramay xaaladda dalku hadda marayo ee dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha, waxqabadka xukuumaddiisa muddadii 5ta sannadood ahayd ee la doortay oo ku eg 16ka May iyo waxyaabaha u qorshaha xukuumaddiisa sannadaha soo socda.
Fadhiga wadajirka ah ee labada gole oo ammaankiisana aad loo adkeeyey, isla markaana dibadda lagu baadhayey xildhibaanadu markii ay gelayeen gudaha hoolka ayaa Guddoomiyaha Golaha Wakiillada, mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro) oo fadhigaa guddoominayey waxa uu mudanayaasha u sheegay in Dastuurku tilmaamayo in Madaxweynuhu khudbad sannadeed u jeediyo labada gole ee Baarlamaanka kalfadhigga ugu horreeya sannadkasta, sidaa darteed waxa uu sheegay in Madaxweynuhu fadhigaa wadajirka ah u jeedinayo khudbad-sannadeedkiisii dastuuriga ahayd, waxase uu sheegay in Madaxweynuhu ka cudurdaartay inuu ka jawaabo wax su’aalo ah oo la weydiiyo, taas oo golaha ka abuurtay buuq iyo guux.
Madaxweyne Riyaale, waxa uu halkaas ka akhriyey khudbad dheer oo ugu qornayd in ka badan 40 bog, taas oo uu kaga hadlay arrimo u badan wax qabadka xukuumaddiisa iyo jawaabo uu ka bixinayey muranka siyaasadeed iyo xaaladda guud ahaan dalka ka taagan xilligan, iyada oo dhawr goor ay hafiyeen buuq ka imanayey mudanayaal golaha dhexdiisa su’aalo la xidhiidha arrimaha uu ka hadlayo ku soo tuurayey.
Madaxweyne Riyaale waxa uu khudbaddiisa si kulul u weeraray Hoggaamiyayaasha labada xisbi ee mucaaridka ah, Komishanka iyo Guddida Midowga Yurub iyo Deeqbixiyayaasha Somaliland ka caawiya arrimaha Dimuqraadiyadda iyo Doorashooyinka, kuwaas oo uu ku dhalliilay mawqifkooda ay ka taagan yihiin muranka Guurtidu geliyey muddaynta doorashooyinka iyo diiwaangelinta ee ay isla qaateen saddexda xisbi iyo Komishanka doorashooyinku. Waxana uu dhammaan hay’adahaas ku tilmaamay kuwo iska indhatiraya sharciga dalka.
Xisbiyada Mucaaridka ah:
“Waxaan maalmahan maqlayaa iyadoon Doorashaba la gaadhin, Rag Mas’uuliyiin Xisbiyo ah oo leh beesha Caalamkaay, na soo kala gaadha. Waxaan leeyahay belaayo beesha Caalamka aan ugu yeedhno oo dalkan ka taagan ma jirto,” ayuu yidhi Madaxweyne Riyaale oo ka jawaabayey baaq uu dhowaan beesha caalamka u jeediyey Guddoomiyaha Xisbiga UCID, Faysal Cali Waraabe.
Waxana uu ku tilmaamay in Gurmadka beesha Caalamka uu ka dalbaday Faysal Cali Waraabe, Guddoomiyaha Xisbiga UCID, mid bar-kuma-taal ah oo aan waxba u tari karin Somaliland.
“Beesha Caalamku ilaa 1991, Koonfurta Soomaaliya ayay u gurmaneysay, xaaladda ay ku sugan tahayna waad ogtihiin, …” ayuu yidhi mudane Riyaale.
Hase yeeshee, waxa uu dafiray in waxa Somaliland kaga duwan tahay Soomaaliya ay tahay Soomaaliya ee halkan ku soo gaadhey ay tahay wadatashi, isqancin iyo isu tanaasul, isaga oo yidhi, “Yeesha kasmadeeda, Somaliland waxa ay kaga duwan tahay iyo horumarka ay maanta gaadhay in ay tahay; in ay degsato Xeerar kala haga oo gaadhsiiyey hannaanka dimuqraadiyadeed ee ay maanta ku naaloonayso, laguna majiiranayo”.
Madaxweyne Riyaale, waxa uu ku baanay sharciga oo uu sheegay inuu isagu u hoggaansan yahay.
“Ummadan inta aan xilka u hayo, waxa aan u ballan qaaday in aan ku hago Dastuurka iyo Shuruucda ka farcantay,” ayuu yidhi.
“Waa ta aan kaga duwannahay, Walaalaheena Koonfureed, oo sharci ay sameysteen oo ay ku dhaqmaan maalin qudha la waayey, taladooduna waxay noqotay tayda haddii la yeeli waayo waxba jiri maayaan,” ayuu raaciyey.
Sidoo kalena waxa uu ugu baaqay hoggaamiyayaasha mucaaridka in ay sharciga u maraan damacooda, kaas oo uu sheegay inuu xaq u siinayo inay u tartamaan hoggaanka dalka, balse, waxa uu ku eedeeyey in khilaadka hadda taagan ay shuruucda qaybna akhriyaan qaybna ka tagaan.
Waxana uu kula taliyey, “Qaylo taagan maanta ma jirto oo idin dhaafsiisan idinka. Si xalaal ah isugu diyaariya in aad tartanka uga qaybgashaan oo aad kasbataan kalsoonida shacbiga idinkoon, qalalaase galin, markastina waxaan idin xasuusinayaa in uu Sharcigu yahay ka ugu sarreeya ee dalkan lagu maamuli doono. Qofka diida inuu ku dhaqmo shuruucda dalka u taala, wuu siqiiri doonaa, Ummadda dhexdeedana maqaam kuma yeelan doono.”
Madaxweyne Riyaale waxa uu qiray in Beesha caalamku ay u ballanqaadday Somaliland inay ka caawinayaan doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda. Hase yeeshee, waxa uu yidhi, “Sharcina innooma sameynayso, innamana maamulayso, horena saddex doorasho ayaynu u soo qabsanay oo beesha Caalamku gacan ka geysatay, iyadoo aaney innagu faragelin shuruucdeena iyo nidaamka aynu u maamulanayno”.
Waxana uu si gaar ahna u cambaareeyey weftigii ka socdey Midowga Yurub iyo Deeqbixiyayaasha ee booqashada ku yimi dalka, isla maalintii golaha Guurtidu gaadhey go’aanka uu muddada halka sano ah ugu kordhiyey Madaxweyne Riyaale, kaas oo ay werwer ka muujiyeen, isla markaana ay ku tilmaameen mid carqalad ku ah heshiiskii saddexda xisbi iyo Komishanku ka gaadheen muddaynta doorashada iyo dhammaystirka diiwaangelinta codbixiyayaasha. Isaga oo taa